အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 24 of 31 | Frontier Myanmar
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ စွမ်းအင်စီမံချက်
ဓာတ်ပုံ – ဆူသက်ပ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ကျောက်မီးသွေးတွင်းက သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နေတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တီကျစ်မှာရှိတဲ့ အဲဒီကျောက်မီးသွေးတွင်းအနီးမှာ နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာသားတွေက ဆိုကြပါတယ်။ အိုလီဗာ ဆလိုး ရေးသားသည်။ တီကျစ်မြို့က လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် ဦးထွန်းလှိုင်က ပြီးခဲ့တဲ့.
ဝန်ကြီးဌာနအချို့တွင် ဝန်ထမ်းများ ဖောင်းပွနေဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က အစည်းအဝးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှာစကားပြောကြားနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- NLD Chairperson Facebook အစိုးရ ဝန်ကြီးအချို့တွင် ဝန်ထမ်းအရေအတွက် ဖောင်းပွနေသည့်အတွက် မလိုအပ်သော ဝန်ကြီးဌာနများကို ပူးပေါင်းသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း ဝန်ထမ်းများ စိုးရိမ်ပူပန်ရန် မလိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီဇင်ဘာ ၁၇.
အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူနှစ်ဦး ဆူပူအောင်လုပ်မှုဖြင့် ထောင်နှစ်နှစ်စီချခံရ
ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်စီ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည့် ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းနှင့် ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်း။ ဓာတ်ပုံ – ကျော်ဖုန်းကျော် ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားများ လုပ်ခတိုးရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သည့် အလုပ်သမားအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးအား ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်သည်။ ယခုထောင်ချခံရသည့် ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းနှင့် ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးသည်.
အောင်လံတွင် ရေတွင်းတူးရာမှ မထင်မှတ်ဘဲ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များပန်းထွက်လာ
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ မကွေးတိုင်း၊ အောင်လံမြို့နယ် နှောက်စမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မဲခေါင်းကျေးရွာ၌ ရေတွင်းတူးရာမှ မထင်မှတ်ဘဲ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များပန်းထွက်လာကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။ ပြည် – အောင်လံကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက် ၃၅ မိုင်အကွာရှိ အဆိုပါမဲခေါင်းကျေရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း၌ အသုံးပြုရန်.
ကျော်ဖုန်းကျော် နှင့် Frontier ရေးသားသည်။